လူပျို စစ်၊မစစ် သိနိုင်မည့် အခြေခံ လက္ခဏာ ၅ချက် - Myanmar Express
June 13, 2018 By Myanmar Express in အမျိုးသားဆိုင်ရာ No Comments Tags: လက္ခဏာ ၅ချက်, လူပျို စစ်၊မစစ်, အခြေခံ
ဒီပို့စ်ကတော့ အမျိုးသား တစ်ချို့ကို မျက်ခုံးလှုပ်စေတော့မှာ သေချာပါတယ်။ မှန်နေတဲ့သူတွေကတော့ အေးဆေးပေ့ါဗျာ 😛ယနေ့လို တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အပျို၊လူပျိုစစ်တဲ့သူဆိုတာ တော်တော်ရှားပါးသွားပြီဗျ။ တော်တော်များများက အိပ်ရာပေါ်က ကိစ္စတွေမှာ ဆရာတွေချည်း ဖြစ်နေကြပြီ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသား အများစုက ယခုအချိန်ထိ မိန်းကလေး aတွရဲ့ အပျိုစစ်မှု၊ မစစ်မှုကိုပဲ အာရုံထား လေ့လာနေကြတယ်။
အခုတော့ အလှည့်ပြောင်းပြီ။ ခင်ဗျားတို့ဟာ လူပျိုရည် ပျက်ပြီးသားလား၊ မပျက်ရသေးဘူးလားဆိုတာကို ပြန်စစ်နိုင်တော့မယ့် လက္ခဏာရပ်တွေ ပေါ်လာပြီ။
လူပျိုစစ်တဲ့ အမျိုးသားတွေက အလွန်ရှားတယ်။ ဒါကိုသိနိုင်ဖို့ အခြေခံကျတဲ့ လက္ခဏာ ၅ရပ်ရှိတယ်။
လူပျိုစစ်တဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာ ဆန္ဒပြီးမြောက်မှုဟာ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေမှုထက် ပိုပြီး မြန်တတ်တယ်။ ပုံမှန် သုတ်လွှတ်ကျင့်မရှိတဲ့အတွက် အခုလို မြန်ဆန်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ သင်ဟာ တကယ်လို့ ခပ်မြန်မြန်ပြီးဆုံးသွားတတ်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့တွေ့ဆုံရလျှင် လူပျိုစစ်စစ်နဲ့တွေ့လို့ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမျိုးသမီး တွေပဲ ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့ အမျိုးသားတွေမှာလည်း ပထမဆုံးအကြိမ် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ သွေးထွက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးအများကြီးထွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အနီရောင်ပုံစံအရည်မျိုး ထွက်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ အမျိုးသားဟာ အိပ်ရာပေါ်က ကိစ္စတွေမှာ အဆင်ပြေပြေ ချောချောမွေ့မွှေ့ ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလွဲလွဲအချော်ချော်၊ ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြင့် အဆင်မပြေမှုများစွာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
လိင်မှုဘဝမှာ foreplay လို့ခေါ်တဲ့ လိင်မဆက်ဆံခင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နမ်းရှုံ့ပွေ့ဖက်တဲ့ ချစ်ရည်လူးခြင်းဟာ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီလိုပြုမှုခြင်းမျိုးကို နားလည်သိရှိမှုမရှိဘဲ အဓိကကို သွားနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
အိပ်ရာ ပေါ်မှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အချိတ်အဆက်မမိဘူး။ အချိုးမကျဖြစ်နေတယ်။ ဒါတွေဟာလည်း လူပျိုရည်မပျက်သေးတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ သင်ဟာ သူရှေ့မှာ အဝတ်ဗလာဖြင့် မတ်တပ်ရပ်နေခဲ့လျှင်တောင် ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို မသိဘဲ အခြားအရာတွေကို ပြုမူနေလျှင်တော့ သဘောပေါက်လိုက်ပါတော့။( အခြောက်လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ…..:D)
လူပျိုစစ်စစ်ကို ကမ္ဘာမပြားခင် မြန်မြန်ရှာတွေ့နိုင်ကြပါစေ မိန်းကလေးတို့….
ဂျင်းထည့်မခံရပါစေနဲ့လို့လည်း ထပ်ပြီး ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…..
လူပြို စဈ၊မစဈ သိနိုငျမညျ့ အခွခေံ လက်ခဏာ ၅ခကျြ
ဒီပို့ဈကတော့ အမြိုးသားတဈခြို့ကို မကျြခုံးလှုပျစတေော့မှာ သခြောပါတယျ။ မှနျနတေဲ့သူတှကေတော့ အေးဆေးပေ့ါဗြာ 😛
ယနလေို့ တိုးတကျလာတဲ့ခတျေကွီးမှာ အပြို၊လူပြိုစဈတဲ့သူဆိုတာ တျောတျောရှားပါးသှားပွီဗြ။ တျောတျောမြားမြားက အိပျရာပျေါက ကိစ်စတှမှော ဆရာတှခေညျြး ဖွဈနကွေပွီ။ ဒါပမေယျ့ အမြိုးသားအမြားစုက ယခုအခြိနျထိ မိနျးကလေးတှရေဲ့ အပြိုစဈမှု၊ မစဈမှုကိုပဲ အာရုံထား လလေ့ာနကွေတယျ။ အခုတော့ အလှညျ့ပွောငျးပွီ။ ခငျဗြားတို့ဟာ လူပြိုရညျပကျြပွီးသားလား၊ မပကျြရသေးဘူးလားဆိုတာကို ပွနျစဈနိုငျတော့မယျ့ လက်ခဏာရပျတှေ ပျေါလာပွီ။
လူပြိုစဈတဲ့ အမြိုးသားတှကေ အလှနျရှားတယျ။ ဒါကိုသိနိုငျဖို့ အခွခေံကတြဲ့ လက်ခဏာ ၅ရပျရှိတယျ။
လူပြိုစဈတဲ့ အမြိုးသားတှဟော လိငျဆကျဆံခြိနျမှာ ဆန်ဒပွီးမွောကျမှုဟာ တဈကိုယျရညျ အာသာဖွမှေုထကျ ပိုပွီး မွနျတတျတယျ။ ပုံမှနျ သုတျလှတျကငျြ့မရှိတဲ့အတှကျ အခုလို မွနျဆနျရခွငျးဖွဈတယျ။ သငျဟာ တကယျလို့ ခပျမွနျမွနျပွီးဆုံးသှားတတျတဲ့ အမြိုးသားနဲ့တှဆေုံ့ရလြှငျ လူပြိုစဈစဈနဲ့တှလေို့ ဖွဈကောငျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဟုတျပါတယျ။ ဒါဟာအမြိုးသမီးတှပေဲ ဖွဈနိုငျတာမဟုတျပါဘူး။ အခြို့ အမြိုးသားတှမှောလညျး ပထမဆုံးအကွိမျ လိငျဆကျဆံတဲ့အခါ သှေးထှကျမှု ဖွဈနိုငျပါတယျ။ သှေးအမြားကွီးထှကျတာမြိုးမဟုတျဘဲ အနီရောငျပုံစံအရညျမြိုး ထှကျတာမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒါကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ။ အတှအေ့ကွုံမရှိတဲ့ အမြိုးသားဟာ အိပျရာပျေါက ကိစ်စတှမှော အဆငျပွပွေေ ခြောခြောမှေ့မှေေ့ ဖွဈနမှော မဟုတျပါဘူး။ အလှဲလှဲအခြျောခြျော၊ ပုံပကျြပနျးပကျြဖွငျ့ အဆငျမပွမှေုမြားစှာ ဖွဈနနေိုငျပါတယျ။
လိငျမှုဘဝမှာ foreplay လို့ချေါတဲ့ လိငျမဆကျဆံခငျ တဈဦးနှငျ့တဈဦး နမျးရှုံ့ပှဖေ့ကျတဲ့ ခဈြရညျလူးခွငျးဟာ အငျမတနျ အရေးကွီးပါတယျ။ အကယျ၍ ဒီလိုပွုမှုခွငျးမြိုးကို နားလညျသိရှိမှုမရှိဘဲ အဓိကကို သှားနတေယျဆိုရငျတော့ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးအကွိမျ ဖွဈကောငျးဖွဈနနေိုငျပါတယျ။
အိပျရာပျေါမှာ တဈဦးနှငျ့တဈဦး အခြိတျအဆကျမမိဘူး။ အခြိုးမကဖြွဈနတေယျ။ ဒါတှဟောလညျး လူပြိုရညျမပကျြသေးတဲ့ အမြိုးသားတဈဦးရဲ့ လက်ခဏာပါပဲ။ သငျဟာ သူရှမှေ့ာ အဝတျဗလာဖွငျ့ မတျတပျရပျနခေဲ့လြှငျတောငျ ဘာဆကျလုပျရမယျဆိုတာကို မသိဘဲ အခွားအရာတှကေို ပွုမူနလြှေငျတော့ သဘောပေါကျလိုကျပါတော့။( အခွောကျလညျး ဖွဈနိုငျတာပဲ…..:D)
လူပြိုစဈစဈကို ကမ်ဘာမပွားခငျ မွနျမွနျရှာတှနေို့ငျကွပါစေ မိနျးကလေးတို့….
ဂငျြးထညျ့မခံရပါစနေဲ့လို့လညျး ထပျပွီး ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ…..
« ပျိုမေတို့ တစ်ခါမှမစဉ်းစားဘူးတဲ့ ရှေးဟောင်းဂန္ထဝင် အဆီချနည်း » ငါအသက်ရှင်နေသမျှမင်းပြန်မလာနဲ့လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဖြိုးငွေစိုး